भारतबाट नेपाल आउँदै गरेको बस शारदा नहरमा खस्यो, ३२ नेपालीको जीवित उद्धार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भारतबाट नेपाल आउँदै गरेको बस शारदा नहरमा खस्यो, ३२ नेपालीको जीवित उद्धार
काठमाडौं । भारतको उत्तरप्रदेशमा भएको बस दुर्घटनामा परेको ३२ नेपालीको उद्धार गरिएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश प्रान्तमा रहेको शारदा नहरमा बस खस्दा ३२ नेपाली र एक भारतीय नागरिकको जीवितै उद्धार गरिएको भारतिय संचार माध्यम टाइम्स अफ इंडियाले जनाएको छ।
उत्तर प्रदेशको लाखिमपुर जिल्लास्थित फूलबेहर गाउँमा रहेको शारदा नहरमा बुधवार बस खसेपछि त्यहाँ रहेको भारतीय प्रहरीले नेपाली नागरिकलाई जीवितै उद्धार गरेको थियो। भारतको शिमलाबाट दाङको लागि छुटेको नेपाली बस बुधबार बिहान करिब ५ बजे शारदा नहरमा खसेको थियो।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा यो घटना भएको हो। टाइम्स ऑफ इंडियाका अनुसार उत्तरप्रदेशको फूलबेहर थानाका प्रहरीले सूचना पाए लगत्तै घटना स्थलमा पुगेर स्थानीयको सहयोगमा ३२ नेपाली र एक भारतीयलाई जीवितै उद्धार गरेको थियो।
त्यस्तै नहरमा खसेको बसलाई् दुई क्रेनको सहायताले बाहिर निकालेको थियो। उद्धारमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार नहर आउनु भन्दा अगाडि एउटा मोडमा चालकले कुरा गर्दै बसलाई तीव्र गतिमा लैजान खोज्दा बस नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको थियो। त्यसपछि बस नहरको रेलिंगमा ठोक्किएर खसेको थियो।
दुर्घटनामा सामान्य घाइते भएका विरामीलाई त्यहाँको जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गरिएको र उद्धार गरिएका सबै नेपालीलाई उपचारपछि नेपाल पठाइएको छ।